कसरी मेरो खातामा लग गर्न? हाम्रो सबै सेवाहरूको मजा लिनको लागि तपाईको खातामा लगिन आवश्यक छ। आदेश गर्न ...
शनिबार अगस्त 08 मा by rikoooo
कसरी मेरो पासवर्ड परिवर्तन गर्न? गर्न को लागी पहिलो कुरा तपाईंको खातामा लगइन गर्नको लागि माथिको लगइन मोड्युल प्रयोग गरी लग इन गर्नु हो। क्लिक गर्नुहोस् ...
के गर्न पहिलो कुरा शीर्षमा लग यिनी मोड्युल प्रयोग गरेर आफ्नो खातामा लग इन गर्न छ। मा «मेरो खाता सम्पादन गर्नुहोस्» क्लिक गर्नुहोस्।
अब, तपाईं बस आफ्नो नयाँ पासवर्ड तल देखाइएको क्षेत्रहरू, दुई पटक प्रवेश गर्न छ। त्यसपछि, परिमार्जन बचत गर्न «पेश» क्लिक गर्नुहोस्।
म मेरो पासवर्ड र / वा मेरो प्रयोगकर्ता नाम भूल गरेका छन्। म के गर्नुपर्छ? यदि तपाईंले बिर्सनुभएको छ भने तपाईले पासवर्ड र / वा तपाईंको प्रयोगकर्तानाम, यी जानकारीहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्नुहुने उपकरणहरू छन्: मैले बिर्सें ...
के तपाईं पासवर्ड र / वा तपाईँको प्रयोगकर्ता नाम भूल छ भने, तपाईं यी informations प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उपकरण छन्:
म मेरो पासवर्ड भूल गर्नुभएको
म मेरो प्रयोगकर्ता नाम भूल गर्नुभएको
तपाईं अझै पनि आफ्नो खातामा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न भने, हामीलाई सम्पर्क हामी आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्छौं भनेर: हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
मेरो जंबो सदस्यता सक्रिय, तर छ मेरो डाउनलोड गति अझै पनि सीमित छ - पहिले, जाँच्नुहोस् कि statut «जम्बो ठीक» वेबसाइटको माथिल्लो दायाँ भागमा राखिएको छ ...